My freedom: Big Update
စာမရေးဖြစ်ဘူး။ ၀မ်းနည်းတာလိုလို ၀မ်းသာတာလိုလို... စိတ်တွေ မူမမှန်ဖြစ်နေလို့ ဟဟ(xD)။ ပုံမှန်လုပ်တာတွေကတော့ လုပ်နေတာပါပဲ။ အလုပ်မှာလည်း Stress များတယ်။ Annual Flu vaccination ကိစ္စတွေနဲ့ ရှုပ်နေတယ်။ မနှစ်က ဆရာကန်တော့ပွဲတုန်းက ဆရာမတွေအတွက် ကလေးမိဘတွေ ကန်တော့တဲ့ပိုက်ဆံတွေကို ဆရာ၊ဆရာမတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲပြန်လှူပြီး နေ့ဆွမ်းကပ်တဲ့ပွဲလေး လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေတစ်ရက်က တိုပါးရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လုပ်တယ်။
ဆရာမတွေနဲ့ ကလေးတွေနဲ့ မိဘတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။ နေ့ဆွမ်းကပ်ပြီး ညနေကျတော့လည်း အတန်းကရှိသေးတော့ အိမ်မပြန်တော့ဘဲ သူငယ်ချင်းအိမ်လိုက်သွားတယ်။ ညနေမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းပြန်လာပြီး စာသင်တယ်။ Vesak Day နေ့က မနက်စောစောဘုရားပန်းသွားဝယ်တယ်။ ဘုရားပန်းကပ်ပြီး ညနေကြတော့ Kallang ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတယ်။ အဲ့မှာဘုရားရှိခိုး၊ ပန်းကပ်တယ်။
Update အကြီးကြီး လုပ်စရာတစ်ခုရှိတယ်။ ကန်ဒီ့ Relationship status (xD)။ ကန်ဒီတစ်ယောက်တည်းနေလာတာ (၄)နှစ်၊ (၅)နှစ်လောက် ရှိပြီထင်တယ်။ ခုကန်ဒီလူတစ်ယောက်ကို လက်ခံလိုက်တယ်။ Inarelationship ဖြစ်မှာကို ကြောက်နေတာနဲ့တင် တစ်ယောက်တည်းနေနေခဲ့တာ။ သူကတော့ ကန်ဒီ့ကို တော်တော်လေးချစ်ပုံရလို့ လက်ခံလိုက်တယ်။ ကန်ဒီကရောချစ်လားလို့မေးရင် စ,စလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ အခုသူနဲ့စကားပိုပြောကြည့်တော့ သူ့အကြောင်းနည်းနည်းပိုသိခွင့်ရတယ်။ ကန်ဒီလိုချင်တဲ့အချက်တော်တော်များများ သူ့မှာရှိတယ်။ ဘုရား တရားသိတာမျိုး၊ ပရဟိတစိတ်ရှိတာမျိုး။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးလည်း မချစ်ရဲပါဘူး။ အများကြီးလည်း မမျှော်လင့်ထားဘူး။ ကလေးလည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ အရင်လို ထပ်ခံရမှာစိုးလို့ ဟဟ(xD)။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဘာမပြော၊ ညာမပြောနဲ့ အိမ်မှာရှိလား။ အဲ့ဘက်လာစရာရှိတယ်။ ထမင်းလာစားမယ်ဆိုတာနဲ့ ရှိတာလေးနဲ့ သူ့အတွက် ချက်ကျွေးရတယ်။ ပဲပင်ပေါက်ကြော်ကို ဆလတ်ရွက်နဲ့ မန်းကျည်းရည်နဲ့ ထုတ်စား၊ ကန်စွန်းရွက်ကြော်က သူကြော်တာ၊ နောက်ပဲပြားအစာသွပ်။ ကောင်းမှကောင်းပဲ ^_^
Posted by Candy at 12:16 PM
ပျော်ရွှင်စရာ relationship လေး ဖြစ်မှာပါ သကြားလုံးလေးရေ။ စိတ်ချလက်ချ ပျော်လိုက်ပါ။
ဒီတစ်ခါအချစ်ရေးမှာကံကောင်းမှာပါ ကန်ဒီရယ်.... တခါတလေကျတော့ mr.right တွေက နည်းနည်းတော့ကြာတတ်တယ်..ကန်ဒီအချိန်ပေးရကျိူးနပ်မှာပါ
all the best candy <3
Nyi ma lay.. best luck..
Candy! pyaw shwin par sae! :) YMKZ
စိတ်ချ လက်ချ ပျော်လိုက်ပါ သမီးရယ်
May 9: My Little Prince